Umfundisi ushise izelamani | News24
Umfundisi ushise izelamani
PHOTO: nokuthula khanyile UDeborah Ngcobo oshe ubuso
USINDE ngokulambisa owesifazane wasePhayiphini kwaMpumuza oshiswe umfundisi ethi wenza isiwasho esiphilisayo ngeSonto eledlule.
UDebra Ngcobo (22) obhandishe ubuso bonke ongakwazi ngisho ukuzikhulumela kuthiwa ubehambele ibandla iNew Christian Church in Zion ngesikhathi ehlelwa ilomshophi.
Ngokusho kukamama wakhe uNonhlanhla Gcwensa, lesigameko senzeke ngeSonto ngezithuba zawo 6 ekuseni.
“Babesenkonzweni yasekuseni kwase kuthi ubaba walapho okwakukhonzelwa khona wakhala ngekhanda. Umfundisi obevakashile wakwaDambuza wathi yena angakwazi ukumelapha kodwa uzodinga upharafini, ushibhoshi, i-spirit kanye nophethiloli ukuze enze isiwasho.”
Uthi lomfundisi wabe esethatha zonke lezinto wazifaka ebhakedeni elingu 20litre wacela amalunga ebandla ukuthi ashaye isoso kuphume imali engango R50 ukuze ezokwenza lesimanga sokuphilisa loyo obegula.
“Waxuba yonke into wahlanganisa namanzi maqede wakumumatha emlomeni, wabe esecela ikhandlela elibomvu walilayitha. Waqala wakhafula ebhekise ngasebandleni nokuyilapho kwadaleka khona umlilo kwasha umntanami emuva kwalokho kwahlekwa ebandleni.”
Uthe uDebra owayesevutha amalangabi wasizwa udadewabo uRuth Ngcobo owazama ukucisha umlilo ngezingubo ayezigqokile wabe esephuthunyiswa esibhedlela e-Edendale. URuth naye wahangulwa yilangabi emlenzeni.
“Okungiphatha kabi kakhulu ukuthi akekho owasenkonzweni oweza kumina ezongitshela ukuthi ingane yami ilimale kanjani, nomfundisi loyo ngezwa ukuthi waphuma ngesamagundane wabaleka emuva kwalesigameko.Kunalokhu bafike ngoshova lapha kwami sebezongitshela ukuthi bekungafanele ngimubophe umfundisi oshise ingane ngoba bekungeyona inhloso.”
UNkk Ngcobo uthe akufunayo ukuthi umfundisi akhokhe ukuze indodakazi yakhe ithole ukwelashwa.
“Ngifuna akhokhele umntanami ubuso bakhe bubuyele esimweni.
Akasalali nasebusuku uyafa izinhlungu ithina esibhekene nalobunzima umfundisi akasekho ukuzobhekana nomonakalo awenzile.
Umfundisi onjani owelapha abantu ngokusebenzisa uphethiloli bese ebathungela ngomlilo. Mina kade ngaqala ukukholwa kodwa angikaze ngihlangane nomfundisi osebenzisa lendlela ukwelapha.”
Uthe indodakazi yakhe ebiyenza uGrade 11 esikoleni samabanga aphezulu iPhayiphini High ngeke isakwazi nokubhala izivivinyo zayo zokuphela konyaka.
“Sekumosheke izinto eziningi ngenxa yokulimala kwakhe. Kufanele abuyele esibhedlela emuva kwamasonto amabili beyobheka ukuthi akukho yini abangamenzela kona njengoba elimele kangaka.”
Uthe ngisho indodana kaDebra eneminyaka emihlanu iphazamisekile yilesigameko.
“Ingane yakhe ilokhu ibuza ukuthi unina unani njengoba ebhandishe ubuso bonke, ithukile ngendlela emubona eyiyo.”
Khona manjalo USbongiseni Shelembe (42) uvele kafushane enkantolo kamantshi eMgungundlovu ngoMsombuluko owedlule kodwa icala lakhe labuye lahoxishwa.
UShelembe ubebhekene necala lokuzama ukubulala kanti ngokusho kokhulumela amaphoyisa asePlessislaer uKapteni Musa Ntombela ngenxa yokushoda kobufazi inkantolo inqume ukulihoxisa icala.